China Carbon fibre boatin'ny takelaka fanamboarana sy orinasa | Yan Tuo
Famaritana manokana momba ny vokatra: namboarina tsara araka ny sary, ary azo namboarina ho an'ny zana-kazo misy ny fahazoan-dàlana any amin'ny firenen-kafa sy karazana vokatra bobongolo. Azafady mba jereo ny serivisy ho an'ny mpanjifa mba hamaritana ny fomba sy ny vidiny rehefa mametraka baiko.
famaritana 140mm * 450mm * 2mm Kitapo fitaterana Kitapo taratasy, sombin-javatra, kitapo fanerena avo
Fepetra fandoavana T / T, D / P, Western Union, Paypal Fahaiza-mamokatra: 50, 000 Pieces Isam-bolana
Akora Fibre karbaona miorina amin'ny polyacrylonitrile Fampisehoana Karazan-kery avo
Ny vatan'ny takelaka fibre karbonina madio dia tsy mitovy amin'ny vatan'ny takelaka fibre karbonika mifototra amin'ny alikaola ABS na aluminium. Izy io dia misy lamba sy résin vita amin'ny kibônika avo lenta. Mavesatra ny lanjany, tsara ny hamafiny, kanto ny bika aman'endriny, avo lenta ary malala-tanana, maharitra ary maharitra. Tsy harafesina izy io, ary ampiana fitaovana amin'ny endrika malaza indrindra amin'ny fiara ankehitriny. Tsy mitovy amin'ny akora metaly tsotra io. Ny fitaovana vy dia mora harafesina amin'ny alàlan'ny elektrika. Ny vy tsy dia matevina dia mora ritra aorian'ny fampiasana azy mandritra ny fotoana voafaritra, mavo ary mamolavola, raha toa kosa ka tsy hiseho izany toe-javatra izany ny takelaka takelaka fibre karbaona.
1. Famaritana vokatra: namboarina tsara mifanaraka amin'ny sary, ary azo namboarina ho an'ny zana-kazo momba ny fahazoan-dàlana an'ny firenena hafa sy karazana vokatra bobongolo. Azafady mba jereo ny serivisy ho an'ny mpanjifa mba hamaritana ny fomba sy ny vidiny rehefa mametraka baiko.
2. Fitaovana: fitaovana fibre karbaona madio, tanjaka ambony sy lanja maivana;
3. Famokarana: famolavolana metaly avo lenta, famolavolana fanodinana mafana;
4. LOGO azo namboarina
Ny orinasanay dia vokatra R&D ary mpanamboatra famokarana mampiasa fibre karbaona toy ny akora. Izy io dia manana traikefa amin'ny famokarana manan-karena sy maodely fitantanana matotra, famolavolana bobongolo ary famolavolana vokatra, famokarana aorian'ny famokarana ary famokarana fonosana, ary manana departemanta QC azy manokana hifehezana tsara ny kalitaon'ny vokatra tsirairay. Dingana rehetra amin'ny dingana. Miezaka izahay hanome anao ny vokatra vita amin'ny fibre carbon. Ny mpanjifa dia afaka manome santionany amin'ny fampandrosoana, na mivelatra sy manamboatra mifototra amin'ny sary sy ny hevitra. Ny fibre carbon dia misy effets streamer miavaka, maivana kokoa, tsy mahazaka hafanana sy pression avo lenta ary mahatohitra ny fihohoka. Azo ampiasaina amin'ny sehatra rehetra izy io.
Teo aloha: Kitapo rivotra fibre karbonika
Manaraka: 3K PlainTwill Weave Carbon Fiber Sheet